Xalaal Safarka Perth Muslim & Hagaha Socdaalka Xalaasha
Marka loo eego tirakoobkii la sameeyay sanadkii 2016, dadka muslimiinta ah waxay gaarayaan 604,235 oo shaqsi, kuwaasoo 42% kamid ah ay ku nool yihiin Greater Sydney, 31% waxay ku nool yihiin Greater Melbourne, halka 8% ay ku nool yihiin Greater Perth. Gobollada iyo taritoriyada saamiga ugu badan ee Muslimiinta yihiin New South Wales (3.58%) iyo Victoria (3.32%), halka kuwa ugu hooseeya ay yihiin Queensland (0.95%) iyo Tasmania (0.49%).
Dad aad u tiro yar oo muslimiin ah ayaa ku nool dhulka miyiga ah marka laga reebo bulshada tirada badan ee Turkiga iyo Albaniyaanka ah ee ku nool Shepparton, oo leh masaajidka ugu faca weyn Victoria, iyo Maleys ku nool Katanning, Western Australia. Beel kamid ah ciraaqiyiinta waxay degeen Cobram oo ku taal wabiga Murray ee Victoria. Waxaa jiray bulsho muslim ah oo Albaaniyaan ah oo laga aasaasay Mareeba, waqooyiga fog ee Queensland laga soo bilaabo 1920-yadii, halkaas oo ay ka aasaaseen masjidka labaad ee ugu da'da weyn Queensland
Perth sidoo kale waxay leedahay jaaliyad muslimiin ah oo diirada saaraya xaafada Thornlie iyo hareeraheeda, halkaas oo uu ku yaallo masaajid. Iskuulka Islaamiga ee Perth ee Australia waxaa dhigta ku dhowaad 2,000 oo arday oo ku kala yaal saddex xarumood.
Perth waa caasimada iyo magaalada ugu weyn ee Western Australia. Waxay ka go'day Adelaide (magaalada ugu dhow oo ay ku noolyihiin in ka badan hal milyan oo qof) masaafo dhan 2,139km, oo ay ku jiraan meelo ballaadhan oo ka tirsan Nullarbor Plain.
Perth wuxuu ku faafaa dhul xeebeed siman, oo laga gooyay wabiga Swan, wuxuuna ku faafay Darling Scarp dhanka bari. Xeebta Badweynta Hindiya ee galbeed waa xadka kaliya ee jir ahaaneed ee ka duwan.
Perth waxaa ku nool dad ka badan 1.8 milyan (2012), taasoo ka dhigeysa magaalada afraad ee ugu weyn Australia.
Rasmiga ah "Magaalada Perth" waa aag yar oo ku yaal dhinaca woqooyi ee Wabiga Swan, oo ka kooban kaliya Xarunta Magaalada. Si kastaba ha ahaatee, aagga weyn ee Perth ayaa aad uga ballaaran, kuna fida dhammaan jihooyinka aan ka ahayn badda.
Gobolka Perth wuxuu hoy u ahaa dadka asal ahaan ka soo jeeda Nyoongar ugu yaraan 40,000 sano ee la soo dhaafay.
Deganayaasha Ingiriiska waxay aasaaseen gumeyste deggen oo bilaash ah 1829 oo qayb ka ahaa Gumeysigii Swan River. Dejinta waxaa loo bixiyay magaca "Perth" kadib markii loo bixiyay magaalada Perth, Scotland, oo ah magaaladii uu ku dhashay Sir George Murray, Xoghayihii Gumeysiga Ingiriiska ee waqtigaas.
Foosha la'aantu waxay carqaladeysay horumarinteeda illaa 1850, markii la keenayay dembiilayaal, waqtigaas oo ay joogsatay gaadiidkii aadi jiray qeybaha kale ee Australia. Tani waxay kordhisay baaxadda gumeysiga iyo shaqadooda waxay gacan ka geysteen qaabeynta qaab dhismeedka hore ee magaalada, iyo sidoo kale kaabayaasha kale. Daahfurka dahabka ee 1890s-kii ayaa kiciyay koboc, markii la helo macdan soo socota, waxay qayb weyn ka ahayd dhaqaalaha gobolka. Galbeedka Australiya wuxuu ku biiray Barwaaqa Sooranka Australia 1901.
Mar waxay ahayd magaalo yar oo go'doon ah, dadkeedu waxay qabsadeen tii Adelaide 1980-yadii. Perth ayaa wali ah magaalada ugu koritaanka badan Australia, sanadihii ugu dambeeyay waxay isku badashay magaalo xoogaa dib u dhac ah waxayna noqotay magaalo firfircoon.
Kobaca degdega ah ee dadka ee Perth wuxuu ahaa mid dhowaan dhawaa. Horumarku kama qaadin gebi ahaanba qaybaha waayeelka ah ee magaalada, gaar ahaan waxaa lagu arkaa jardiinooyinka tirada badan iyo meelaha kale ee cagaaran ee ku dhow dhow CBD.
In kasta oo ay go'doon tahay, Perth waa magaalo si la yaab leh u dhaqan badan. Heerka sare ee socdaalka ee Perth awgeed, waxyar in ka yar kalabar dadka degan Perth waxay ku dhasheen Australia dibaddeeda. U dhawaanshaheeda Koonfur-bari Aasiya iyo Afrika ayaa horseeday qulqulka muhaajiriinta ka imanaya dalal ay ka mid yihiin Malaysia, South Africa iyo Thailand, tanina waxay ka muuqataa noocyada kala duwan ee cunnooyinka laga heli karo magaalada Perth. Haddii aad rabto inaad la kulanto dhaqan caalami ah oo aan lahayn buuqa iyo buuqa magaalooyinka waaweyn, waxaa laga yaabaa in Perth uu noqon doono koobkaaga shaaha.
Magaalada waxay leedahay cimilo dhex dhexaad ah oo dhexdhexaad ah. Xilliga kulaylaha waa kuleyl waana qalalan yihiin, halka jiilaalku guud ahaan yihiin kuwo qoyan oo fudud. Heerkulka xagaaga celcelis ahaan 30 ° C (86 ° F) inta u dhexeysa Nofeembar iyo Abriil. Heerkulka ugu sarreeya inta lagu jiro dhererka xagaaga ayaa gaari kara mararka qaarkoodna ka badnaan kara 40 ° C (104 ° F). Maalmaha aadka u kulul waxay u muuqdaan kuwo leh qoyaan aad u hooseeya, taas oo ka dhigaysa xaaladaha kuwo la qaadan karo.
In ka Magaalada weyn ee Perth, Heerkulka-xagaaga ayaa si dhakhso leh kor ugu kacda subaxa hore, oo la raaxeysto galabtii markii "Dhakhtarka Fremantle" uu ka duulayo gudaha badda si uu u qaboojiyo magaalada illaa 15 ° C. Dhakhtarku wuu kufilan yahay inta uusan gaarin meelaha gudaha ah, oo uga tagaya buuraha iyo wixii ka sii dambeeya inay bararaan ilaa qorrax dhaca ka dib.
Xilliga Jiilaalka (Juun-Agoosto) heerkulku inta badan waa qiyaastii 15 ° C maalintii, wuxuuna badiyaa dhacaa ilaa 8-10 ° C habeenkii. Heerkulka ugu yar ayaa la ogaaday inuu hoos uga dhaco 0 ° C habeenno cadcad. In kasta oo Perth uu soo maro waqtiyo qallalan oo dheer, haddana marka roobku da'o, wuu da'ayaa. Duufaannadii hore oo wata dabaylo xoog leh ayaa marmar jugleeya habeen jiilaal, laakiin guud ahaan ma keenin burbur ka badan geed la jaray ama deyr la simay. Duufaan xoog leh ayaa dhalisay roobdhagaxyaale iyo burbur aad u daran. Baraf waligeed lama oga inuu ku soo dhacay Xarunta Magaalada Perth, inkasta oo boodh aad u fudud lagu yaqaan inay ka dhacaan meelaha sare ee Perth Hills.
Skyline City waxay ka timid King Park
Goorta la booqdo
Guga (Sebtember-Nofeembar) iyo Dayrta (Maarso-Meey) waa waqtiyo ku habboon oo lagu booqdo Perth. Guga (gaar ahaan Oktoobar / Nofeembar) ayaa laga yaabaa inay tahay waqtiga ugu wanaagsan, maadaama roobab qabow oo wanaagsan ka dib, ubaxyada duurjoogta ah ee caanka ku ah agagaaraha King Park iyo Avon Valley ayaa si qurux badan u ifiya. Meelaha magaalooyinka waaweyn iyo dhulka duurka ku yaal waxay leeyihiin noocyo ubaxyo badan oo ubax badanaa, sidaa darteed waa caqli-gal in laga iibsado farmashiyaha maxalliga ah farmashiyaha deegaanka ka hor miiska lagu iibsado ama antihistamines. Dadka xeebta taga ee ka yimaada xilliyada qabow ayaa laga yaabaa inay u arkaan bilaha xagaaga mid aad u adag, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan inay soo booqato inta lagu jiro Maarso – Abriil ama Oktoobar – Noofembar, oo ay qaataan koofiyad, kareemka qorraxda iyo muraayadaha indhaha.
Dadka deegaanka waxay u muuqdaan inay fasaxayaan inta lagu jiro dhererka xagaaga ama jiilaalka, ama inay ka baxsadaan cimilada, ama ay u dabaaldegaan. Xilliga jiilaalka, dadka degan magaalada Perth waxay aalaaba u safraan waqooyiga Broome ama Bali si ay diirimaad u helaan, ama haddii kale waxay sii joogi doonaan jajabyo yaryar oo koonfurta iyo koonfur galbeed ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha si ay ugu raaxaystaan ​​cimilada qabow ee qoyan iyo cuntooyinka xilliyeed.
In kasta oo Galbeedka Australia ay leedahay inbadan ciidaha dadweynaha, uma badna inay dhib badan u keenaan safaradaada. Dukaammada badankood wali way furan yihiin, gaadiidka dadweynaha wali wuu socdaa (jadwal yaraaday) cirkana wali waa buluug. Ka reebitaanku waa Jimcaha Wanaagsan, Maalinta Anzac (25 Abriil) iyo Maalinta Kirismaska ​​(25 Dis), marka dukaamada iyo maqaayadaha badankood la xidho. Guud ahaan xafiisyada, bangiyada iyo adeegyada dawlada oo kali ah ayaa u xidhan 7da ciidaha kale ee ciida; Maalinta Sannadka Cusub (Jan 1), Maalinta Australia (26 Jan), Isniinta Isniinta, Maalinta Shaqaalaha (Isniinta ugu horreysa ee Maarso), Maalinta Dhalashada Boqoradda (Isniinta ugu dambeysa Sebtember), Maalinta Aasaaska (Isniinta ugu horreysa Juun) iyo Maalinta Feerka (26 Diseembar) ).
Dhammaan duulimaadyada caalamiga iyo kuwa gudaha ee la qorsheeyay ayaa yimaada kana baxa Madaarka Perth. Gegada diyaaraduhu waxay leedahay afar terminaal, kuwaas oo ujeeddooyinka safarka dhulka ah loo qaadan karo inay yihiin laba goobood. T1 iyo T2 waa dhinac-dhinac-bari dhanka runway-ga, halka T3 iyo T4 ay dhinac-gees uga jiraan galbeedka. Bas bas bilaash ah ayaa dhexmara labada gobal, wuxuu qaadanayaa 15 daqiiqo. Marka laga hadlayo gaadiidka dhulka, basaska dadweynaha waxay u adeegaan garoonka diyaaradaha, tagaasida iyo gawaarida kirada ahna waa la heli karaa.
Perth waa marinka ugu muhiimsan ee laga galo Australia oo aan ku oollin xeebta bari. Duulimaadyada Aasiya ka sokow, waxaa jira duulimaadyo aan joogsi lahayn oo ka yimaada Johannesburg, Mauritius, Auckland iyo London Heathrow, kan dambe ayaa ah kii ugu horreeyay ee aan joogsi lahayn ee u dhexeeya Yurub iyo Australia. Waxaa jira duulimaadyo maxalli ah oo taga magaalooyinka waaweyn ee Australia iyo duulimaadyo goboleed taga garoomo diyaaradeed oo yaryar oo ku yaal Galbeedka Australia. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mar waxay ahayd wadada kaliya ee lagu gaaro Perth iyo Australia inteeda kale, badiyaa silsilado. Maalmahan tirada sii yaraanaysa ee maraakiibta xamuulka ahi waxay leeyihiin meelo rakaab ah oo Fremantle laga heli karo oo ka timaadda Koonfur-bari Aasiya, Los Angeles iyo San Diego ee Maraykanka, iyo marar dhif ah oo ka yimaada Yurub. Xarumahoodu waa kuwo aasaasi ah oo aan caadi ahayn, waxay lamid yihiin hudheelka hoteelka oo leh bad-buurnimo lagu daro hal-abuurka cusbada leh ee Conradian.
Imaatin raaxo leh oo qiimo jaban ah, kaalay mid ka mid ah maraakiibta dalxiiska kuwaas oo si joogto ah uga soo wac Fremantle, oo ay ku jiraan boqoradda Mary 2 iyo boqoradda Victoria. Kuwani waxay badanaa bixiyaan hal-dalxiis hal-dhinac ah oo ka taga ama ka yimaada Fremantle, badiyaa magaalooyinka kale ee Australia, ilaa New Zealand, iyo Koonfur-bari Aasiya. Badiyaa waxay raacaan xagaaga, marar dhif ah jiilaalka. Halkan ka hubi jadwalka waxaadna u baahan doontaa inaad ballansato bilo badan kahor.
Dhammaan tareennada dhaadheer iyo kuwa gobollada waxay ka socdaan Bariga Perth, 1 km NE ee magaalada hoose. Waa qayb ka mid ah Xarunta Gaadiidka Dadweynaha basas fara badan oo magaalada ah iyo tareenada dhulka hoostiisa mara ayaa u adeega, waxaana jira taksi. Xilliga xagaaga 2017/18 xarunta ayaa dib loo dhisayaa, taas oo carqaladeyn karta marin u helka iyo adeegyada tareenka qaarkood.
The Tareenka transcontinental Indian Indian waxay ka socotaa Perth ilaa Sydney iyada oo loo marayo Kalgoorlie-Boulder, Adelaide iyo Broken Hill. Maaha wax raqiis ah, laakiin safarkan oo qaata afar maalmood iyo saddex habeen, waa mid ka mid ah safarada waaweyn ee tareennada adduunka. Tareenku wuxuu marayaa wadada ugu dheer ee wadada tareenka aduunka ugu badnaan (478 km) marka uu sii maro Nullarbor.
Tixgeli inaad iibsato kaarka tareenka, oo kufiican safarka aan xadidnayn ee adeeg kasta oo tareenada weyn ee Koonfurta oo ay kujiraan Indian Pacific (Sydney ilaa Perth), Ghan (Adelaide ilaa Darwin iyada oo loo maro Alice Springs) iyo The Overland (Adelaide-Melbourne). Kaadhka tareenka wuxuu xaq kuu siinayaa inaad ku fariisato tareen kasta muddo 6 bilood ah $ 700 ($ 100 ka yar ardayda / daneeyaha). Qaadashada gaarigaaga sidoo kale waa suurtagal inta u dhexeysa magaalooyinka waaweyn iyo Alice Springs, lacag dheeraad ah.
Adeegyada tareenka ee gobolka waxaa ku shaqeeya Transwa. Afartooda waddo waa:
The Australind waxay socotaa laba jeer maalintii inta u dhaxeysa Perth iyo Bunbury.
The Kalkaaliye waxay socotaa maalin kasta inta udhaxeysa Perth iyo Kalgoorlie, tareen labaadna wuxuu maraa Isniinta iyo Jimcaha.
The AvonLink socodsiiyaa inta udhaxeysa Northam iyo Midland Isniinta ilaa Jimcaha.
The MerredinLink socodsiiyaa inta udhaxeysa Perth iyo Merredin maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha.
Hawl wadeenada ugu waaweyn ee tababarayaasha masaafada dheer iyo kuwa magaalooyinka ee Galbeedka Australia waa Transwa oo ay dawladu maamusho, iyo Tababaro Daacadnimo.
Basaska transwa oo ka socota Xarunta Gaadiidka Dadweynaha ee Bariga Perth. Waxay habeenki woqooyi u ordaan xeebta (labadaba Brand Highway 1, iyo Coastal Highway 60) ilaa Dongara, Geraldton, iyo Kalbarri. Si aad woqooyi uga sii baxdo, qaado Tababaraha Daacadnimada, ee hoos lagu sharaxay.
Transwa waxay leedahay seddex marin SE oo loo maro Esperance, iyo seddex wadiiqo oo SW ah (oo dhamaan looga maro Bunbury) ilaa Pemberton. Khadadkooda “Great Southern” waa Albany, hal adeeg ayaa usocda Katanning.
Tababarayaasha Daacadnimada waxay ka socotaa Midland Station, oo 10 km bari ka xigta magaalada hoose, oo ka soo qaado Wellington Street Perth oo ka soo horjeedda xarunta dhexe ee metro (waddooyinka qaar waa caksi). Waxay woqooyi u ordaan laba ama saddex jeer usbuucii iyagoo sii maraya Brand Highway 1 illaa Dongara iyo Geraldton ka dibna Carnarvon, Coral Bay, Exmouth, Port Hedland iyo Broome. Broome waxaad u wareejin kartaa tababaraha Greyhound Australia Darwin, halkaasoo tababarayaasha ay u cararaan Alice Springs, Adelaide, iyo magaalooyinka bariga Australia.
Khadadka Tababaraha Koonfur Galbeed waxay ka socdaan dhowr magaalo oo SW ah oo ay ka mid yihiin Busselton, Bunbury, Margaret River, Manjimup, Collie iyo Dunsborough, ilaa garoonka diyaaradaha ee Perth iyo Elizabeth Quay oo ah magaalada hoose.
Ma jiro isku-xir bas oo joogto ah oo ku teedsan Nullarbor Plain oo u dhexeeya Perth iyo Adelaide, laakiin waxaa jira safarro u janjeedha tacabirka oo ay ku jiraan kaamam iyo indho-indheyn. Midka kaliya ee sida joogtada ah u shaqeeya waa Nullabor Traveler, oo leh safarro 9/10 maalmood ah. Kuwaani waxay ka baxaan bariga magaalada Perth Sunday, dhanka galbeed waxay uga baxaan Adelaide Arbacada, usbuuciiba hal mar xagaaga (Nofeembar-Jan) oo gaabinaysa bishii hal mar oo ah xilligii fasaxa, oo aan soconayn bartamihii jiilaalka. Qiimaha dalxiisku waa qiyaastii $ 1600 qofkiiba.
U kaxeynta magaalada Perth laga bilaabo Adelaide (2700 km) ama Darwin (4100 km) waa macquul, maadaama tayada wadada ay wanaagsan tahay, shidaal, cunno iyo hoyna ay ku yaaliin wadooyinka waaweyn. Laakiin waxay qaadan doontaa qaybta ugu wanaagsan ee usbuuc walba dhinac kasta - taas macnaheedu waa toddobaad wadis adag, oo leh waqti yar oo lagu eego ama waxqabadyo socda. Dadka deegaanku waxay u tixgelin doonaan dalxiis 'hal mar noloshiisa', taas oo ah qaabkooda sida caadiga ah loo fahmo ee Australiyaanka ah ee leh "Jahannamo, mar dambe, lamaane!". Waxaa laga yaabaa inay si fiican u dhammeyso nolosha gaarigaaga, haddii uu da 'weyn yahay.
Aagga weyn ee Perth wuxuu leeyahay nidaam gaadiid dadweyne oo si caddaalad ah loogu kalsoonaan karo oo jaban oo ay maamusho Transperth. Macluumaadka ku saabsan jadwalka, carqaladaynta ama wax -ka -beddelka adeegga waxaa laga heli karaa degelkooda, adoo wacaya 13 62 13 ama 'Transperth InfoCentres' ee xarunta tareenka dhexe iyo dhowr laamood oo Magaalada ah
Shabakad basas dadweyne oo macquul ah oo la isku haleyn karo ayaa u adeegta Xarunta Magaalada, xaafadaha iyo magaalooyinka ka baxsan, oo leh xiriir wanaagsan oo u dhexeeya waddooyinka iyo adeegyada tareenka metrooga.
Basaska Transperth waa bilaash ah bartamaha Perth. Tani waxay khusaysaa dhammaan adeegyada baska inta ay ku sugan yihiin Aagga Gaadiidka ee Bilaashka ah ee CBD. Uma baahnid ruqsad ama Smartrider, iska fuul. Intaa waxaa dheer, waxaa jira basaska CAT oo lacag la'aan ah inta ay socdaan. Waxaa jira afar waddo - guduud, buluug, jaalle, cagaar - basaskuna waxay u dhigmaan midabka. Faahfaahinta ka fiiri bogga Bartamaha magaalada
Nidaamyada basaska ee bilaashka ah waxay ka shaqeeyaan Northbridge, Perth / Fremantle iyo Joondalup - eeg boggaga la xiriira.
Shabakada tareenka ee hareeraha magaalada waxay ku fiican tahay dhaqso u tagida meelaha ka baxsan hareeraha magaalada. Dhammaan adeegyadu waxay istaagaan xarunta dhexe ee Perth ee Magaalada iyagoo ku sii jeeda ama ka imanaya saldhigyada joojinta ee durugsan. Shabakaddu waxay ka kooban tahay shan sadar:
Khadka Fremantle, u adeegida galbeedka Perth, ilaa Fremantle.
Khadadka Midland, u adeegida bariga Perth ilaa Midland, iyo bixinta wareejinta adeegyada tareenada gobolada iyo gobolada.
Khadka Armadale / Thornlie, u adeegida koonfurta-bari Perth ilaa Armadale, oo leh xarig isdaba-joog ah ilaa Thornlie.
Khadka Joondalup, u adeegida woqooyi-galbeed Perth, ilaa Butler (iyada oo loo marayo Joondalup).
Khadka Mandurah, u adeegida koonfurta Perth, ilaa Mandurah
Dhammaan khadadka tareenka waxay isugu yimaadaan Saldhigga Perth. Adeegyada Joondalup iyo Mandurah Line waxay adeegsadaan dhufto dhulka hoostiisa mara oo ku yaal saldhigga dhulka hoostiisa mara ee 'Perth Station Station', oo si toos ah ugu xiran saldhigga Perth, oo u oggolaanaya wareejinta lugeynaya khadadka kale.
Khadadka oo dhami waxay ku xirmaan adeegyada basaska kala duwan. Saldhigga Basaska ee Wellington Street, oo ku yaal CBD, waa meesha adeegyada basaska badan laga raaci karo, waxayna si toos ah ugu xiran tahay Saldhigga Perth. Dekedda Basaska ee Esplanade waa goob kale oo adeeg bas ah oo ku taal CBD, waxayna si toos ah ugu xidhan tahay Esplanade Station oo ku taal Khadadka Mandurah iyo Joondalup. Inta badan saldhigyada tareenka ee guud ahaan magaalada Perth waxay leeyihiin wareejin basas oo u adeegta aagga maxalliga ah ee xarunta.
Adeegyada tareenka waxay socdaan 5-10 daqiiqo kasta (tani waxay kuxirantahay khadka iyo saldhigga) inta lagu jiro saacadaha ugu badan, tareenno badan ayaa socda xawaare. Xilliga ugu sarreysa iyo inta badan maalmaha dhammaadka usbuucyada, tareenadu waxay socdaan 15min kasta iyo 30min kasta wixii ka dambeeya 19:00 iyo dhammaadka usbuuca. Khadka Armadale wuxuu socodsiiyaa wakhti kasta mar kasta marka laga reebo habeennada dambe.
Inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya (07: 00-09: 00 & 16: 30-18: 30) Khadadka Midland (bariga) iyo Joondalup (waqooyi-galbeed) waxay noqon karaan kuwo aad u camiran. Iska ilaali xariiqyadan inta lagu jiro ugu sarreysa haddii ay macquul tahay. Baaskiillada looma oggola tareennada u socda magaalada subaxa hore, ama fiidkii magaalada ka fog; sidoo kale looma oggola inay galaan ama soo maraan saldhigyada Perth, Perth Underground ama Esplanade. Rakaabka wata mootooyinka waa inay isticmaalaan saldhigyada ka baxsan CBD (City West, McIver, Canning Bridge ama Leederville) inta lagu jiro waqtigan, ka dibna ay u raacayaan halka ugu dambeysa ee ay ka tagayaan.
Adeegyadu waxay bilaaban doonaan 05: 00 waxayna joogsanayaan saqda dhexe.
Xusuusnow inaad iibsato tigidh ansax ah ama isticmaal kaarkaaga SmartRider markaad ku safreyso shabakadda tareenka. Ka gaabinta haysashada tigidh sax ah waxay kugu kacaysaa $ 100, oo ganaaxa laban laabma bil kasta waa la dhaafay. Ku guuldareysato inaad bixiso ganaax dhan, waxaadna ku dambeyn kartaa inaad bixiso illaa $ 20,000 oo ganaax ah iyo kharashaadka maxkamadda. Tilmaam wanaagsan oo la xasuusto ayaa ah, haddii aad leedahay SmartRider, inaad isticmaasho mid ka mid ah irdaha cashuurta lagu raaco si aad saldhigga u gasho, sidaas darteed sidoo kale waxaad hubsan kartaa inaad leedahay "taag". Samee isla marka aad baxeyso. Saldhigyada oo dhami ma laha albaabadan. Haddii saldhiggaagu uusan sameynin, ka raadi tiir cagaaran oo leh akhristaha SmartRider halkii.
Adeegga habeen dambe
Subaxnimada Sabtida, adeegyada dheeraadka ah waxay ka baxaan magaalada Perth 01:00 iyo 02:00, iyadoo seddex adeeg oo dheeri ah subaxnimada Axadda (01:00, 02:00) Adeegyadani waxay wax u qabtaan dadka guryahooda ka soo laabanaya ee naadiyada habeenkii ee Northbridge. Adeegyadan waxay ku shaqeeyaan hal jiho oo keliya, iyagoo ka sii jeeda magaalada. Adeegyada Armadale waxay wadaan dhammaan joogsiyada xilligan; ma jiro adeeg habeyn dambe ah oo loo qabto Thornlie.
Soo noqnoqodka adeegga usbuuc dhammaadka waa 15 daqiiqo dhammaan jidadka. Raad-raacku wuxuu sababi karaa xiritaanka qayb qayb dhamaadka usbuuca, iyadoo basaska lagu beddelayo tareennada. Waa dhif iyo nadir in khad dhan la xiro shaqada darteed, laakiin waxay ku dhacdaa ugu yaraan laba jeer sanadkii Framantle iyo Midland Lines.
Inta lagu jiro dhacdooyinka gaarka ah, qaar ka mid ah adeegyada tareenka dheeriga ah ayaa shaqeyn kara, sida baska Perth ilaa West Leederville, ama Mandurah ilaa West Leederville gaarka ah. Waxaa ugufiican in laga fogaado tareenadan hadaad awoodo, maadaama ay badanaa buux dhaafiyeen.
Transperth waxay ka shaqeysaa adeega baska doonta inta udhaxeysa magaalada, kana ambabaxeysa Elizabeth Quay, iyo Mends Street Jetty ee Koonfurta Perth. Adeegyadu waa kuwo soo noqnoqda maalintii oo dhan, waana dhif in adeeg la joojiyo. Laga soo bilaabo Mends Street, waa socod toddoba daqiiqo ah oo loo maro Beerta Xannaanada ee Perth. Blue CAT waxay kuxirantahay doonta, iyo Elizabeth Quay (oo horey loo yiqiinay Perth Esplanade) Saldhigga Tareenka wuxuu kudhowyahay boosteejada doonta. Qiimaha tikidhada ayaa ka mid ah baska iyo tareenka Transperth system, oo leh qiimo 2-qaybood ah oo loo baahan yahay si looga gudbo wabiga, ama waxay noqon kartaa qayb ka mid ah basaska aagagga badan ama tigidhada tareenka ah, haddii lagu qaado muddada loogu talagalay sida ku cad tigidhka .
Tareenada, basaska iyo doomaha, nidaamka Transperth wuxuu u qaybsan yahay 9 aag oo isku urursan, iyo Aagga Gaadiidka Bilaashka ah (Bartamaha magaalada iyo hareeraheeda). Aagga Gaadiidka Bilaashka ah ee tareenada waxaa heli kara oo keliya kuwa haysta SmartRider (kaarka gaadiidka), rakaabka aan kaarka haysan waa inay iibsadaan tigidh. Tigidhada iyo tigidhaduba waxay ku shaqaynayaan dhammaan basaska, doonyaha iyo tareenada aagga gudahiisa. Tigidhadu waxay shaqeynayaan 2 saacadood waxaana loo isticmaali karaa safarkaaga soo noqoshada.
Aagga 2 wuxuu ku fidsan yahay illaa Fremantle dadka soo booqda badankoodna tigidh laba aag ah ayaa ku filnaan doona. Safar keli ah, tikidhada lacagta waxaa laga iibsan karaa wadayaasha basaska ama mashiinada tigidhada lacagta lagu shaqeeyo ee ku yaal saldhigyada tareenka. Inta ugu habboon SmartRider kaararka ayaa si otomaatig ah u xisaabiya qiimahaaga oo ka goynaya kaarkaaga markaad ku dhaji oo ka bax markii la raaco ama laga dejiyo adeegyada baska iyo tareenka. SmartRiders waxaa laga iibsan karaa ama dib looga buuxin karaa Xarumaha Macluumaadka Transperth, tareenada waaweyn iyo saldhigyada basaska iyo / ama inta badan Newsagents. Wadayaasha basaska sidoo kale way kaa qaadi karaan SmartCard-kaaga, hase yeeshe wax isbedel ah ma keenayaan. Kaararka SmartRider waxay leeyihiin qiimo-dhimis 15% ah oo ka badan qiimaha lacagta.
Waxaa jira $ 9.30 Kali Rider baasas ah oo la heli karo wixii ka dambeeya 09:00 maalmaha badankood. Kaadhka Qoyska raaciddu sidoo kale waxay ku kacaysaa $ 9.30 waxayna u oggolaaneysaa laba rakaab ah oo raqiis ah oo lagu daray (shan?) Rakaab lacag dhimis safar aan xadidnayn - kuwan waxaa la heli karaa oo keliya Isniinta ilaa Khamiista ka dib 18:00 (15:00 Jimcaha), iyo maalinta oo dhan maalmaha fasaxa iyo dugsiga ama ciidaha dadweynaha. Tani waa qiimo aad u wanaagsan lamaanayaasha iyo lammaanaha carruurta leh, maadaama qiimaha hal-ku-kaca ah oo keliya uu ka socdo $ 2.70 hal aag, $ 4.00 laba aag, iyo $ 4.70 saddex aag.
Rakaabkaas aan wadan kaararka SmartRider waxay ubaahan doonaan inay tusaan tikidhkooda waraaqaha ilaalada taraafikada markay galayaan ama ka baxayaan Saldhiga Perth iyo saldhigyada hareeraha laga soo xulay.
Khibradaha taksi ee Perth waxay u dhexeeyaan dhib-la'aan iyo dhibaato. Sugitaannada dheeraadka ah inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa (05: 00-09: 00 maalmaha shaqada iyo fiidadka dhammaadka usbuucyada) waa wax iska caadi ah, laakiin xilliyadaas ka baxsan, tagaasida waa badan yihiin. Boos sii qabsashada taksiga waa macquul laakiin waxaa lagugula talinayaa kaliya haddii safarkaagu u badan yahay $ 25 ama aad u safreyso garoonka diyaaradaha. Tan waxaa ugu wacan habka isku dhafan ee ay adeegyada dirista u maareeyaan ballansashada waqtiga leh. Haddii safarkaagu u eg yahay inuu gaaban yahay, waxaa wanaagsan inaad si fudud u dalbato taksi markaad diyaar u tahay inaad baxdo, ama aad ku amaano taksi haddii aad ku sugan tahay meel mashquul badan.
Laba shirkadood oo taksi oo waaweyn ayaa ah Tagaasida Swan (13 13 30), kuwaas oo dira Swan, TriColor, 13CABS, tagaasida Yellow and Coastal, iyo Tagaasida Madow iyo Cadaan (131 008). Waxaa jira shirkado badan oo yaryar kuwaas oo inta badan ka shaqeeya Xarunta Ganacsiga Dhexe. Khidmadaha waxaa xukuma dawladda gobolka oo shirkadaha dirista oo dhami waa isku qiime. Calanku waa $ 3.90 inta lagu jiro maalmaha shaqada, kuna kordhaya $ 5.70 habeenka usbuuca iyo dhamaadka usbuuca. Qiyaasta kiiloomitir waa $ 1.59 / km oo lagu dalacay $ 0.10 oo lagu kordhiyay. Kharashaadka ayaa lagu dabaqaa xilliyada fasaxa ee loo qoondeeyay (Sannadka Cusub iyo Maalinta Kirismaska) iyo habeennada dhamaadka usbuuca inta u dhaxeysa saqda dhexe iyo 05:00. Tipping darawallada tagaasida ee magaalada Perth caado ma aha, laakiin ku darista lacag yar ($ 1 ama $ 2) sicirka safarka waa u caadi adeeg gaar ah.
Taksi ka qabashada an goobta madadaalada goor dambe oo jimce ah ama habeen sabti ah waxay arkeysaa naadiyada naadiga ku sugaya taksiga oo istaagaya ilaa 2 saacadood oo guriga loogu tagayo. Darawallada waxaa lagu yaqaan inay ka fogaadaan inay ka soo qaadaan macaamiisha sakhraansan meel ka baxsan baararka, naadiyada ama irridda laga galo xarunta dhexe ee Perth. In dhaweydba waxaa soo kordhayay faraxumeynta galmada ee dumarka safarka ah sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad ku safarto koox koox. Waxaa jira si gaar ah loo qoondeeyey 'darajooyin ammaan ah' oo ka shaqeeya waqtiyadan oo ay ilaaliyeyaashu saf ugu geli karaan nabadgelyada (qaraabada). Ikhtiyaar kale ayaa ah tareennada Transperth habeen dambe iyo basasku waxay si gaar ah ugu ordaan dabaaldegyadooda kadib markay maqnaadaan.
Adeegyada Madaarka Perth guud ahaan waa la isku halleyn karaa, laakiin xilliyada ay furan yihiin (01: 00-08: 00, u diyaargarow sugitaan aad u badan oo tagaaga ah) maaddaama tagaasida sugitaanku ay midba mid ugu sii gurguuranayo. noqo dhawr baabuur oo sugaya inay la kulmaan diyaaradaha imanaya.Tagaasida caadiga ah ee tagaasida ee ka timaada Gegada Diyaaradaha ee Magaalada ilaa Magaalada waa kudhowaad $ 30 ($ 35 oo ah kan Caalamiga ah) .Waxaa jira $ 2 cashuurta garoonka diyaaradaha oo lagu bixinaayo safarka.
Diiwaangelinta la sameeyay in ka badan 24 saacadood ka hor, waxaad codsan kartaa in ballansashadaada horay loo sii xaqiijiyo iyadoo darawalku yahay $ 9 lacag dheeraad ah. Haddii taksigu yimaado ugu dambeyn toban daqiiqo, khidmadda waa laga dhaafi doonaa. Boos celinta caadiga ah ayaa wali la sii deyn karaa 24 saacadood ka hor iyada oo aan kharash dheeraad ahi ku jirin.
Perth si raaxo leh ayaa loogu sahmin karaa lug ama baaskiil maadaama Perth uu leeyahay qaar ka mid ah baaskiillada ugu fiican iyo kaabayaasha lugta ee Australia.
Shabakada baaskiilka ee Perth waxay soo bandhigeysaa waligeed sii kordheysa, nidaam balaaran oo balaaran oo wadooyin baaskiil / lugo. Nidaamyada ayaa tilmaamaya;
Maamulaha Wadooyinka Wadaag (Jidadka sare ee wadaagga ah ee ku teedsan jidad tareen kasta iyo waddooyinka waaweyn ee waaweyn).
Wadooyinka Baaskiilka Deegaanka (waddooyin taxane ah oo waddooyinka ah iyo qaar ka mid ah qaybaha ka baxsan waddada ka baxsan waddooyinka oo dhex mara jardiinooyinka-waddooyinkan waxay bixiyaan isku xirka meelaha sida dugsiyada, Xarumaha dukaamaysiga iyo tas-hiilaadka kale ee madadaalada.
Shaqooyinka guud ee guud (mashaariicda waxaa ka mid ah hagaajinta guud ee deegaanka baaskiil wadidda ee aagagga, sida waddooyinka baaskiilka waddada iyo garbaha xiran).
Dhamaadka xarumaha safarka (oo ay ku jiraan U-Rails, Cora rakes baaskiil iyo sanduuqyada keydka iyo qolalka beddelaadda).
Khariidadaha wareegga waxaa laga heli karaa inta badan dukaamada baaskiilka, iyo Khariidadaha Gaadiidka. Waaxda Gaadiidku waxay siisaa hagitaanno kala duwan, khariidado iyo buugaag yar yar oo loogu talagalay baaskiil wadayaasha. Haddii aad maskaxda ku hayso dariiq dabiici ah, buugaagtani waxay kuu qaadi karaan xeebta, King Park, Armadale iyo Buuraha ama hareeraha Wabiga Swan.
Waxyaabaha loogu jecelyahay baaskiillayda maxalliga ah waa raacitaanka dhanka Waqooyiga ee Wabiga Swan ee u dhexeeya Magaalada iyo Nedlands. U oggolow 60 min safar wareeg ah oo wadadan ah, maxaa yeelay waxaad la kulmi kartaa madax-dabayl xoog leh.
Baaskiillada waa loo oggol yahay inay raacaan tareennada Transperth laakiin ma inta lagu jiro saacadda ugu sarreysa illaa laallaabi karo mooyee.
Magaalada Perth mararka qaar waxay lahayd buugaag iyo buugaag yaryar oo loogu talagalay safarro isdaba-joog ah oo lagu hago.
Laba Cagood iyo Wadne garaac ayaa hagtay safarro socod ah.
Ku wadista baabuurka Perth ee CBD iyo Northbridge waxay la macno noqon doontaa bixinta baarkinka, taas oo ku kici karta $ 40 maalintii maalmaha shaqada. Waxaa sidoo kale jira ciriiri waddooyinka keena CBD inta lagu jiro saacadaha ugu badan. Ikhtiyaarka kale ayaa ah inaad dhigato boosteejada tareenka oo aad tareen qaadatid. Saldhigyada qaar waxay lacag yar ka qaadaan baarkinka, oo maalinta oo dhan baarkinka waa la buuxin karaa. Markaad dhigato CBD, waxaad ku imaan kartaa meelaha ugu badan ee cagahaaga ama bas bilaash ah.
Kireynta gaari waa habka ugu fiican ee gaadiidka loogu safro xaafadaha iyo meelaha soo jiidashada leh. Inta badan shirkadaha waaweyn ee kireynta baabuurta waxay leeyihiin goobo ku yaal ama u dhow Perth. Kireynta Miisaaniyadda Gawaarida waxay leedahay toddobo goobood oo ku yaal Perth, Avis, Hertz iyo Ace Rent A Car waxay leeyihiin in ka badan hal goob, sidoo kale. Wadooyinka waaweyn iyo jidadka waaweyn ee Perth waa lacag la’aan wax lacag ah oo laga qaado, waana suurtagal in daqiiqado gudahood lagu hareereeyo baadiyaha quruxda badan. Sidoo kale tixgaliso kiro Perth limo ikhtiyaar ahaan.
Bixiyeyaasha kireynta baabuurta waxay ku yaalliin garoonka diyaaradaha iyo magaalada. Waxaa jira adeeg bixiyaal sidoo kale xaafadaha.
Xadka xawaaraha ee meelaha la dhisay waa 50 km / saacaddii haddii aan si kale loo tilmaamin calaamadaha taraafikada.
Booliska si dhif ah looma arko wadooyinka laakiin kamaradaha xawaaraha badan ayaa aad ugu badan. Wadista xitaa 5 km / saac ka sareysa xadka xawaaraha wuxuu muteysan karaa ganaax. Wadista 40 km / saacad ka sareysa xadka xawaaraha waxay ka dhigan tahay in gaariga la xirayo 28 maalmood xitaa haddii uusan aheyn gaarigaaga (kiree gawaarida marka laga reebo).
Muuqaalka ugu sareeya magaalada iyo hareeraheeda waa
Galbeedka Farshaxanka WA iyo PICA, iyo Mint - fiiri bogga Xarunta magaalada, laakiin ogow Matxafka WA wuu xidhan yahay illaa 2020
Kings Park iyo Botanic Gardens - fiiri bogga Xarunta Magaalada
Xabsiga Fremantle, Matxafka Badaha iyo Shipwrecks gallery - eeg bogga Fremantle
Meelaha waaweyn waxaa ka baxsan jardiinooyin qaran oo aan la shaacin, xeebo aan dad lahayn iyo goobo kale oo xiiso leh.
Waxaa jira aag cayiman oo loogu talagalay xayawaanka kangaroos halkaas oo ay ku wareegi karaan waddooyinka martida. Xayawaanku dadka ayey u barteen, markaa waad arki kartaa iyagoo aad isugu dhow.
Si aad u aragto kangaroos-duurjoogta ah, booqo Beerta Xusuusta Pinnaroo (Xabaal, laakiin maaha qaabka Yurub). Waxay u jirtaa masaafada u jirta Whitfords Transperth Tareenka / Saldhigga Metro - kaliya ka gudub wadada weyn, bixitaanka wadada weyn oo raadso albaabka bidix. Maaddaama ay jiraan boosas badan oo iyaga u gaar ah, waxaad arki kartaa iyaga oo aan cunin oo keliya laakiin sidoo kale boodboodaya.
Gudaha Whiteman Park, kangaroos waxay ku soo dhowaadaan meelaha baabuurta la dhigto ee ku yaal aagagga booqdayaasha waaweyn ee Beerta. Kangaroos sidoo kale waxaa badanaa lagu arkaa koorsooyin badan oo golf ah, oo ay ku jiraan The Vines iyo Joondalup Resorts.
Waxa kale oo jira xayawaanno marmar u soo dhowaada Mundaring Weir Hotel iyo baarkinka baabuurta ee ka sarreeya Mundaring Weir / Lake CY O'Connor.
Kubadda Cagta Australia. Perth, sida Melbourne, ayaa waalan iyada cago badan. Toddobaad walba usbuuc kasta inta udhaxeysa (qiyaastii) Maarso iyo Ogosto, cusub ee la furay Perth Stadium (oo loo yaqaan Optus Stadium) ayaa hadda martigaliya midkoodna Gorgorka West Coast ama Fremantle Dockers naadiyada loogu talagalay kulamada Australian Football League (AFL). Maxaad u dooran weyday midabada aad ugu jeceshahay kuna soo biir xiisaha? Ciyaaraha oo dhan waa la iibinayaa laba toddobaad ka hor ciyaar kasta, iyadoo inta badan kuraasta horay loogu sii iibiyey xubnaha naadiga. Si kastaba ha noqotee, tikidhada qaar ayaa had iyo jeer loo diyaariyaa xubnaha ka soo horjeeda naadiga ka dibna dadweynaha guud. Celceliska kaqeybgalka goobta cusub xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee AFL (2018) wuxuu ahaa ku dhowaad 46 500. Ciyaar aad u dhow oo la heli karo, ciyaaraha West Australian Football League (WAFL) waxaa lagu qabtaa meelo badan oo ku xeeran Perth isla muddadaas. Dadka tirada badan waxay gaarayaan dhowr kun oo kaliya, xitaa waxaad aadi kartaa garoonka inta lagu jiro nasashada si aad u laad laadatid, ama aad u dhageysatid tababaraha kooxda la hadlaya! Aussie ayaa xukuntay in kubada cagta ay adagtahay in la fahmo marka hore, laakiin waa wax aad u xiiso badan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ciyaaraha kale Ciyaaraha kale ee xirfadleyda ah waxay leeyihiin joogitaan Perth:
Ammaan Perth - Haddii aad doorbideysid kubbadda xiriirka (guud ahaan ay dadka reer Australia u yaqaanaan “kubbadda cagta”) oo aad u aragto in xeerarka Australiya ay aad u jahwareersan yihiin, kooxda Kubadda Cagta ee Perth Glory ayaa ku tartamaysa A-League, heerka ugu sarreeya kubadda cagta ee Australia. Xilli ciyaareedku wuxuu soconayaa xagaaga laga bilaabo Oktoobar ilaa Maarso, iyadoo ay suuragal tahay u soo bixitaanka taxanaha fiinaalka (isreebreebka) oo soconaya illaa Abriil. Waxay leeyihiin naadi walaasheed, Perth Glory W-League, oo ka tartanta haweenka W-League. Labada kooxba waxay ku ciyaaraan Perth Oval, oo sidoo kale loo yaqaan NIB Stadium sababo la xiriira heshiis kafaala qaad. Garoonku waa socod 10-daqiiqo ah oo ka yimaada Northbridge, ama socod 3-daqiiqo ah oo ka yimaada Saldhigga Tareenka ee Claisebrook.
Dagaalyahanada Reer Galbeedka - Ku ciyaar cricket-ka tartamada waaweyn ee Australia - Sheffield Shield (“fasalka koowaad”; ciyaaro soconaya afar maalmood), Koobka Ford Ranger (hal cricket-ka maalinlaha ah; kullamada waxay socdaan 8 saacadood). Hoyga guriga waa WACA. WACA waxay sidoo kale horey u martigalisay mid ka mid ah kulamadii Imtixaanka xagaaga (in ka badan shan maalmood) iyo ugu yaraan hal-maalin caalami ah oo ka dhan ah koox caalami ah oo socdaal ku tageysa, hase yeeshe dhacdooyinka qaarkood ayaa haatan lagu ciyaaraa goobta cusub, ee weyn, Perth Stadium.
Peror Scorchers - Ciyaar cricket-ka KFC Twenty20 Big Bash (tartammada waxay soconayaan ugu yaraan 3 saacadood), caadi ahaan toddobaadyada ugu dambeeya Diseembar. Tartamada waxaa lagu ciyaaraa WACA, laakiin waxaa loo bixiyay "Foornada" si ay ula jaan qaado mowduuca Scorchers.
Ciidamada Galbeed - Kooxda midowga Rugby-ga Super 15, oo ay ku lug leeyihiin kooxo ka socda Australia, New Zealand, iyo South Africa. Xilligu wuxuu soconayaa Febraayo illaa dhammaadka Maajo. Kooxda Western Force waxay ku ciyaaraan garoonka NIB. Kooxda midowga Australian Rugby union, The Wallabies, sidoo kale waxay ciyaar ku ciyaaraan Perth sanadaha badankood.
Xayawaanka loo yaqaan 'Perth Wildcats' - Ka ciyaar Horyaalka Kubadda Koleyga ee Qaranka. Ciyaaraha gurigu waxay ku yaalliin Perth Arena. Ku biir Ciidanka Cas!
Perth Lynx - Ka ciyaar Horyaalka Kubadda Koleyga ee Haweenka. Ciyaaraha gurigu waa Xarunta Basketball-ka ee Bendat, Floreat.
Perth kuleylka - Ka ciyaar Horyaalka Kubadda Koleyga ee Australia. Ciyaaraha gurigu waa Baseball Park, Thornlie.
Xumadda Xeebta Galbeed - Kubadda shabaqa ku cayaar Horyaalka ANZ. Ciyaaraha gurigu waa HBF Stadium, Mount Claremont (oo hore loo oran jiray Perth Superdrome, iyo Challenge Stadium)
Cycle. Perth waxay leedahay wadooyin baaskiil aad u fiican iyo cimilo aad u fiican sanadka oo dhan taas oo ka dhigaysa mid ku habboon baaskiil wadista. Waddooyinka soo raaca Webiga Swan waa kuwo muuqaal qurxoon oo inta badan fidsan. Waad qaadan kartaa baaskiil kuu gaar ah, ka kireysan kartaa baaskiil mid ka mid ah bixiyeyaasha kireynta baaskiilka ee ku yaal agagaarka Swan River ama waxaad ku dalxiis tagi kartaa Bluetongue Bike Tours ama Pedal OZ. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Jardiinooyinka Perth waxay u kala baxaan jardiinooyin magaalada gudaheeda ah sida Park Park, Baarkinka Geesinimada leh, Iyo Harada Monger, jardiinooyinka magaalada banaankeeda sida John Forrest iyo Beerta Whiteman.
Daawo filim. Marka lagu daro isku -dhufashada badan ee muujinaya Hollywood -ka xannibaadaha inta badan Xarumaha wax iibsiga, waxaa sidoo kale jira shaneemo madaxbannaan ama Yurub ah, oo ay ku jiraan Paradiso oo ku taal Northbridge iyo shineemooyinka Luna ee Leederville ama Fremantle. Shineemooyinkani waxay soo bandhigaan wax -soo -saarka maxalliga ah, Bollywood, Faransiis iyo Talyaani ah, xafladaha filimada caalamiga ah iyo dokumenteriyaal sannadka oo dhan. Haddii aad booqato xagaaga, fiiri mid ka mid ah shineemooyinka badan ee hawada furan, oo ku yaal Park Park, Filimada Burswood, Luna Leederville, iyo Iskudhafan. Waxaa jira xitaa shineemo saqafka sare ah oo ku taal Northbridge dusha sare carpark dhowr dabaq ah! Perth wuxuu leeyahay hal waddo oo harsan, oo ku yaal Kingsley. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bax. Maalin Fremantle; aad ugu fiican socodka iyada oo aan ujeedo gaar ah maskaxda lagu hayo ama waxoogaa dukaamaysi fudud ama maxaad ugu raaxaysan weyday cunto ama kafee iyo keeg inta aad jawiga ku dhex qoysay Ha moogaanin Suuqyada Fremantle. Xabsiga Fremantle, Matxafka Badda, Round House iyo taallada AC / DC ee Bon Scott waa soo jiidasho caan ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qaado safar maalinle ah. Sida meel kasta oo leh cufnaan hoose sida Perth, waxaad waqti badan ku qaadan doontaa safarka inta u dhexeysa indhaha. Mid ka mid ah safarada maalinlaha ah ee ugu wanaagsan magaalada Perth waa booqashada Jasiiradda Rottnest, oo ah keyd dabiici ah oo ka baxsan xeebta Fremantle. Waxaa jira noocyo badan oo duurjoog ah oo la arko (oo ay ku jiraan kuwa caanka ah ee Quokka) iyo fursado lagu arko nibiriyada, dolphins iyo shaabadood dhogorta ka baxsan xeebta, laakiin tani marwalba waxay ku xirnaan doontaa xilliga. Ikhtiyaar kale (ka dhaw, ka jaban laakiin ka yar) ayaa ah inaad booqato Jasiiradda Penguin, oo ah guriga "Little Penguins" ama "Fairy Penguins", oo ku taal shan daqiiqo xeebta Rockingham, oo ah 45 daqiiqo baabuur wadista koonfurta Perth. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Booqo Suuqyada Usbuuca. Tusaalooyinka wax soo saarka maxalliga ah ee suuqyada dhammaadka todobaadka ee Perth. Suuqyo badan oo dhammaadka usbuuca ah ayaa soo muuqday sannadihii la soo dhaafay oo ay keeneen baahida dadka deegaanka ee ku nool magaalada Perth ay u qabaan alaab tayo leh. Suuqyadu sida caadiga ah waxay ka kooban yihiin 20 ilaa 50 meheradood oo shaqsi ah oo ay leeyihiin milkiileyaasha / soo saarayaasha / beeraleyda waxayna inta badan ku takhasusaan suuqyada beeraleyda (wax soo saarka cusub), Hawkers suuqyada (cuntada dariiqyada), suuqyada guud (alaabada gacanta lagu farsameeyo, dharka, muusikada, hadiyadaha iwm), ama iskudhafka kuwan. Maaddaama saacadaha furitaanka iyo goobaha ay si isdaba joog ah u kala duwan yihiin, waxaa fiican inaad ka raadiso khadka tooska ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Suuqyada Fremantle waa "hay'ad Fremantle" oo caan ku ah dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka u leh farshaxan maxalli ah, wax soo saar cusub, cunto, iyo madadaalo. Wuxuu furmaa Jimcaha, Sabtida iyo Axadda waana socod fudud oo 8 daqiiqo ah oo ka yimaada xarunta tareenka Fremantle.
Suuqyada Manning Beeraleyda waxay caan ku yihiin dadka maxalliga ah si ay u soo saaraan dalagyo maxalli ah oo cusub, quraac iyo kafee. Waxay leedahay in kabadan 50 xero oo mashquul badan kahor 10:00. Furan Sabtida 07: 30-12: 30. Gaadiidka dadweynaha ee joogtada ah ee xarunta basaska ee Jaamacadda Curtin (oo ay ku xigto socod 15-daqiiqo ah oo dhex mara bartamaha uni).
Suuqa Beeraleyda Magaalada Perth wuxuu diiradda saarayaa wax soo saarka dabiiciga iyo biodynamic cusub. Furan Sabtida 08: 00-12: 00. 3-daqiiqo socod ah oo laga raaco istaanka tareenka ee Claisbrook.
Suuqyada Twilight Hawkers waxay ku leeyihiin Bartamaha magaalada in ka badan 50 goobo cunto. Waxay furan tahay habeenka Jimcaha 16: 30-21: 30 laga bilaabo Oktoobar ilaa Abriil.
Perth wuxuu ku faanaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican Australia xeebaha xeebta, kuwaas oo ku habboon dabaasha bilaha diiran. Qorrax madoobaadku waa lagama maarmaan, daawada cayayaanka celisa waxay ku imaan kartaa fiidkii. Maaddaama xeebuhu ay ku yaalliin badweynta furan, waxaa si xoog leh lagula talinayaa inaad ku 'dabbaasho inta u dhexeysa calammada' xeebaha la kormeeray. Xeebta Cottesloe waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan magaalada Perth, waana mid ay jecelyihiin dadka deegaanka iyo dalxiisayaashuba. Xeebta Scarborough sidoo kale waa mid caan ah oo la heli karo.
Perth waxay hoy u tahay jaamacado dhowr ah, kuwaas oo ah Jaamacadda Western Australia waa qayb ka mid ah magaca "Kooxda siddeedaad". Dhammaan jaamacadahaani waxay leeyihiin fursado ardayda caalamiga ah inay isku qoraan iyadoo qayb ka ah barnaamijyadooda shahaadada, ama qayb ka ah heshiisyada is-dhaafsiga ee jaamacadaha shisheeye. Jaamacadaha kale ee kuyaala agagaarka magaalada weyn ee Perth waa Curtin University, Murdoch University, Edith Cowan University iyo Notre Dame University.
Xoogga ugu weyn ee dukaammada dukaanku waxay ku yaalliin Bartamaha Magaalada inta ku dhow Northbridge waa goobta dukaamada madaxbannaan ee gaarka loo leeyahay. Xaafadaha Trendier-ka sida Buurta Lawley, Leederville iyo Subiaco leeyihiin tiro ka mid ah dukaamada moodada naqshadeeye ee garaaca.
Inta badan noocyada raaxada ee ugu sarreeya sida Gucci, Chanel iyo Louis Vuitton waxay ku yaalliin agagaarka King Street ee CBD.
Dhismooyin waaweyn oo dukaameysi oo ku yaal hareeraha magaalada, sida gudaha Morley (Galleria), Cannington (Carousel), Midland (Midland Gate), Joondalup, Booragoon (Magaalada Beerta), Innaloo iyo Karrinyup leedahay waaxda caadiga ah iyo dukaamada silsiladda.
Suuqyada Fremantle waxay bixisaa khibrad kaligeed iyada oo ka badan 150 xero madax banaan.
Saacadaha wax lagu iibsado ee ku yaal xaafadda Perth ee dukaamada cabbirka dhexdhexaadka ah ilaa dukaamada waaweyn / dukaamada waaweyn waa:
08: 00-21: 00 Isniinta ilaa Jimcaha
09: 00-17: 00 Sabti
11: 00-17: 00 Axadda iyo inta badan ciidaha dadweynaha
Xataa Xarumaha wax -gadashada ee waaweyn, dukaamo badan oo yar yar ma furna ilaa 21:00 habeen kasta, laakiin kaliya Khamiista, dhaqanka, welina ugu mashquulka badan, habeenkii “wax -gadashada dambe ee habeenkii” ee Perth. Dhammaan dukaammada waxaa laga rabaa inay xidhaan Jimcaha Wanaagsan, Kirismaska ​​iyo Maalinta ANZAC.
Dukaammada waaweyn sida IGA iyo dukaamada kale ee yar yar waxay yeelan karaan saacado wax kala iibsi oo is bedbeddela (xarumaha shidaalka qaarkood iyo dukaamada geeska yar yar ayaa furan 24 saac).
Canshuurta 10% Alaabta iyo Adeegyada ayaa lagu soo daray sicirka liiska. WaterTown (oo hore u ahaan jirtay Harbor Town) waa meesha soo -saareyaashu ku leeyihiin xarumo warshadeed; waxoogaa heshiisyo wanaagsan ah ayaa halkaas laga heli doonaa. Waxay u jirtaa masaafo u jirta Xarunta Perth, ama soo qaado baska Jaalaha ee CAT ee bilaashka ah.
Ka dib Kirismaska ​​(iyo illaa iyo Luulyo iyo sidoo kale dukaamo badan) waa waqtiga ugu fiican ee la yimaado Perth si wax looga iibsado. Dukaamada Perth qaarkood waxay furan yihiin Maalinta Feerka iyo 27 Diseembar. Macaamiisha ayaa lagu yaqaan inay sameystaan ​​xarriiq wadada dhinaceeda xitaa geli dukaamada sida 'Guess' iyo Myer soo galida iyo dhaqaaqa kor u qaadida waxaa ilaaliya ilaalada amaanka si looga hortago saxmada dhulka.
Mid ka mid ah cilladaha Perth ayaa ah in dadkeedu aysan soo dhaweyn casho habeenkii. Meelo aad u yar ayaa cuntada loo fidin doonaa wixii ka dambeeya 22:00, xitaa habeennada Jimcaha ama Sabtida. Inta badan maqaayadaha ku yaal Perth wax uma qabtaan Xalaal, khudrato ama vegans, iyo haddii ay sameeyaan - xaddiga ayaa aad u xaddidan. Haddii aad raadineyso meel ku duugan cuntada khudradda, Fremantle waa wax weyn.
Subiaco wuxuu ku yaal meel dhowr kiilomitir u jirta Xarunta Magaalada. Waa xaafad casri ah laakiin madadaalo leh oo leh xoogaa cunto iyo madadaalo ah, in kasta oo ay aad qaali u tahay.
Claremont waa xaafad ku taal khadka tareenka ee Fremantle halkaas oo aad ka heli doonto makhaayado wanaagsan sidoo kale (oo ay ku jiraan Talyaani dhab ah), in kastoo, haddana, ay qaali noqon karto oo ay jiraan xadad xadidan.
The Dooxada Swan, gaar ahaan wadada West Swan Road waxay ka kooban tahay khamri kala duwan, soo saarayaasha cuntada iyo maqaayado leh aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan beeraha canabka ah. Gaar ahaan wanaagsan yihiin Makhaayada Madadaalada Madoow, Beerta Duckstein, Elmar's iyo Makhaayada Mallard Duck.
Kalamunda iyo hareeraha kale ee buuraha bariga hareeraheeda waxay bixiyaan dhagxaan qarsoon oo laga qaxweeyo, dukaamo yaryar iyo soo saarayaal cunto oo ku yaal baadiyaha quruxda badan oo leh aragtiyo cajaa'ib leh. Dadka deegaanka Perth waxay u aadi jireen dalxiis waxayna soo saari jireen xaflado meelahaas ah qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad; sikastaba ha noqotee markii dhaqanku ku yaraaday moodooyinka u socda dhanka xeebta, waa meel aad ufiican oo lagu booqdo meelaha dalxiiska loo dalxiis tago ama safar nabadeed lagu aado baadiyaha oo leh aragtiyo wanaagsan iyo cunno wanaagsan oo aan sidaa uga fogeyn magaalada. Dadku badiyaa waxay u dalxiis tagaan cuntada DIY ee beero canab ah, beero canab ah, cheesemakers, rootiyaasha iyo warshadaha kale ee aqallada, farshaxanka iyo makhaayadaha iyada oo aan si dhab ah loo abaabulin. Caadi ahaan sida ugu fiican ayaa loo booqdaa xilliga Gu'ga ama waxyar ka dib roobabka markay kayntu ugu wanaagsan tahay.
Guildford waxay leedahay dukaamo badan oo qaraami ah (in kasta oo ay la mid tahay dhammaan suuqyada qadiimiga ah ee Australiya waxaa booqda boqolaal dalxiisayaal ah iyo dadka deegaanka ah, sidaa darteed gorgortanka dhabta ahi waa dhif iyo naadir), laakiin waxaad ka heli kartaa shaah subaxa cafe wanaagsan iyo qado qaawan oo ku jira qaab dhismeed hore oo wanaagsan. Aaggan wuxuu leeyahay qaar ka mid ah guryaha la deggan yahay ee ugu da'da weyn Perths iyo matxafyo dhismeedyo waaweyn iyo makhaayado. Tiyaatarka qadiimiga ah hada waxaa ku yaalo dukaan weyn oo Aasiya ah iyo farshaxan gacmeed qiimihiisu yahay booqashada iyo matxafka taxidermy quirky ee dhowr albaab oo hoos ah. Alfreds Jikada waa baar yar oo halyeey u ah dadka deegaanka, kuwaas oo urursada dadweyne fara badan oo habeenkii fura.
Mid ballaaran Western Rock aargoosatada (looga yaqaan gudaha magaceeda hore ee kalluun qolof leh) warshadaha. Inta badan xashiishka waxaa loo dhoofiyaa Aasiya iyo USA lacag aad u tiro badan. Si kastaba ha noqotee, qiimaha kalluunka ee ku yaal Perth wuxuu noqon karaa mid jaban, gaar ahaan xilliga xagaaga ee xilli wanaagsan. Fursad aad ku siiso isku day adoon jabinin bangiga.
Chilli Mussel waa takhasus caan ah oo maxalli ah, oo ka kooban moosil lagu kariyey yaanyo iyo jiilaalka chili, oo laga heli karo makhaayado kala duwan.
Perth wuxuu leeyahay tiro badan oo ah Gloria Jeans, Marwo Mauds iyo wadini Dukaammada inta badan waxay ku yaalliin Bartamaha Magaalada iyo meelaha laga dukaameysto ee ku xeeran. Kooxaha kafateeriyada qaabka yurub ee madaxbannaan waxay safaan jidadka casriga ah ee xaafadaha ku xeeran Xarunta Magaalada. Meesha ugu wanaagsan ee loo yaqaan espresso wanaagsan waa Kafeega Strip gudaha Fremantle oo ay si dhow ula socdaan degmooyinka Subiaco, Leederville iyo South Perth. In kasta oo dhaqanka Perth uu leeyahay dhadhan tayo sare leh oo kafee ah oo uu dalbado heerar aad u sarreeya oo wax soo saar ah, Perth wuxuu leeyahay sharaf sharaf leh inuu haysto qaar ka mid ah celceliska qiimaha kafeega ee waddanka ugu qaalisan. Qaxwada caadiga ah waxay inta badan ku dhowdahay $ 4.
Halkee laga joogaa Perth
Saamaynta nasiib darrada ah ee soo ifbaxaya macdanta ayaa ah in qiimaha hoyga ee magaalada Perth uu cirka isku shareeray sannadihii la soo dhaafay, iyadoo celcelis ahaan qolka qolku uu ka sarreeyo kuwa ku yaal Sydney, Melbourne ama xitaa Rome. Jaantus ku saabsan bixinta in ka badan $ 100 habeenkiiba xitaa qolka ugu aasaasiga ah, iyo in ka badan $ 200 hudheel 3 illaa 4 xiddig leh. Guud ahaan, qiimayaasha qolku waxay u muuqdaan kuwa ugu qaalisan bartamaha usbuuca, marka ganacsato badan oo ganacsato ah soo booqdaan, halka (qaraabada) gorgortanka badanaa laga heli karo maalmaha fasaxa ah.
Huteellada iyo hudheellada
Inta badan hoteelada Perth waxay ku urursan yihiin Bartamaha Magaalada, xaafadda deriska la ah ee East Perth (inta u dhexeysa Xarunta Magaalada iyo Wabiga Swan), iyo agagaarka xeebta ee Perth/Fremantle. In yar oo ka durugsan, magaalada xeebta ah ee Mandurah, oo ay si sahlan u heli karto nidaamka tareenka ee magaalada Perth, ayaa ah fasax fasax oo caan ku ah dadka deggan Perth, waxayna leedahay hudheelo badan iyo goobo lagu nasto oo xeebta ah si ay ugu adeegto dadkaas.
Hoteello iyo boorsooyin
Perth aad ayey caan ugu tahay boorsooyinka boorsooyinka, waxaana jira hoteelo tiro badan oo kuwa dalxiisayaasha ah oo kuyaala magaalada, gaar ahaan nawaaxiga Northbridge. Dhowr huteello oo ku yaal magaalada Perth ayaa ku jira xaalad aad u xun, markaa hubi inaad aragto qolkaaga ama aad ka hubiso qiimeynta qadka.
Jardiinooyinka caravan waa kharash wax ku ool ah oo inta badan qiimo wanaagsan u leh habka qoysku ugu sii nagaado magaalada Perth. Jardiinooyinka caravan badanaa waa masaafo xoogaa ka fog magaalada, laakiin qaarkood waxay leeyihiin joogsiyo bas oo laga baxo albaabka hore. Jardiinooyinka caravan guud ahaan waa nadiif oo waxay bixiyaan noocyo hoy oo kala duwan.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada ka dhaca Perth
Saraakiisha Booliska Galbeedka Australia oo roondo ku jira
Khataraha ugu weyn ee soo booqde dibadeed ee ku wajahan magaalada Perth ayaa ah gubashada qorraxda iyo fuuqbax. Hubso inaad isku daboosho SPF 30 + shaashadda qorraxda iyo koofiyad, iyo doorbid shaati. Bilaha kuleylka leh, iska jir fuuqbaxa xagaaga kulul, dhalo biyo ahna ha kuula jiraan. Ka-hortagga cayayaanka sida 'Aeroguard' ayaa waxtar yeelan doona fiidkii xagaaga haddii aad bannaanka joogto.
Booliisku guud ahaan waa saaxiibtinimo oo waa loo dhowaan karaa. Si aad ula xiriirto booliska, ambalaaska ama adeegga gurmadka degdegga ah ee dab damiska ayaa ah "000" taleefanka loogu talagalay xaaladaha degdegga ah. "131 444" waa nambarka lagu taliyay ee ah 24/7 caawinta booliska iyo weydiimaha guud.
Tareenadu guud ahaan amaan ayey ku yihiin ilaalada transit-ka oo labo labo u safraya, iyagoo gaaf wareegaya tareenada inta badan la qorsheeyey saacadaha ugu sareeya Dhammaan saldhigyada tareenka waxay leeyihiin waqti ay ku sii socdaan tareenka iyo badhanka degdegga ah oo loo isticmaali karo in loogu yeero ilaalada gaadiidka haddii ay baahidu timaaddo. Dhammaan idaacadaha waxay leeyihiin kaamirooyin si toos ah loola socdo kuwaanna waxaa lagu dhaqaajin karaa riixitaanka fudud ee badhanka degdegga ah. Tareenka dhexdiisa, waxaa ku yaalliin badhannada “la hadal darawalka” gaari kasta, laakiin tareennada waaweyn qaarkood kuma hayaan albaab kasta.
Shabakada basaska guud ahaan waa amaan, laakiin saacadaha kadib way ka khatar yarayn karaan shabakada tareenka. Wadooyinka basaska qaar waxay leeyihiin roondooyin amni oo xadidan oo la heli karo, jidadka qaarna waxay lahaayeen in ka badan qaybtooda dhaqanka bulshada lidka ku ah.
Haddii ay tahay inaad bas ku raacdo habeenkii, u fadhiiso sida ugu dhow darawalka haddii ay dhibaato dhacdo, u sheeg darawalka. Badanaa dhacdooyinka basaska ayaa sii soconaya muddo aad uga dheer sidii ay ahayd maxaa yeelay cidina ma weydiisato darawalka baska caawimaad.
Ka taxaddar taxadarka markaad ka gudbeysid waddada isgoysyada dadka lugeynaya, adigoo lugeynaya waddada loo maro barta laga soo galo / laga baxo ee meelaha baabuurta la dhigto ama marka laga gudbayo wadada isgoyska T-ga.
In kasta oo dadka lugeynaya ay xaq sharci u leeyihiin wadada, wadayaasha qaar ayaa doorta inay iska indhatiraan sharcigan. Marka laga hadlayo isgoysyada dadka lugaynaya, baabuurtu waa inay kuu gaabiyaan adiga in kastoo taxaddarku kugu habboon yahay. Haddii aadan arkin gaari gaabis ku socda, ha billaabin inaad gudubto. Badanaa waxaa fiican inaad raacdo hogaaminta dadka deegaanka oo aad u guurto koox ahaan.
Sidoo kale haddii aad gaari wadato, waxaad inta badan la kulmi kartaa dad ka gudbaya wadada nalka taraafikada oo aan wax gunno ah ka sugin sugitaanka nalalku inay faa'iido u yeeshaan, iyo kuwa mari doona jidka marka ay u muuqato waqtiga ugu habboon. U fiirso dadka lugeynaya ee hortaada ku socda marka aad leedahay iftiin cagaaran.
Ku wadista Perth waxay noqon kartaa mid toos ah, maadaama jidadkeeda waawayn ay ku xirmaan qanjidhada kala duwan taasoo sahlaysa hagida. Si kastaba ha noqotee, iska ilaali safarka inta lagu jiro saacadaha shaqada (07: 00-09: 00 iyo 16: 00-18: 00), gaar ahaan xagaaga ama maalmaha kulul. Qaar badan oo ka mid ah waddooyinka waaweyn ee Perth looma qorsheynin baaxadda taraafikada ee ay hadda wajaheyso iyadoo dib loo soo celinayo kororka tirada dadka. Darawalada Perth ayaa si isa soo taraysa loogu yaqaan inay yihiin kuwo aan ka fiirsan darawalada kale ee wadooyinka xiliyadaan, taas oo sidoo kale sababtay dib u dhacyo badan shilalka awgood.
Waxaa jira sharciyo yar oo la daryeelo intaad baabuur ku wado Galbeedka Australia. Markii lagu joojiyo isgoyska tareenka, ha usii wadin ilaa nalka biligleynaya uu istaago xittaa haddii albaabka xawligu si buuxda kor ugu kacay maaddaama ganaaxyo la soo saarayo. Waxaa jira dulqaad hoose xagga xawaareynta sidaa darteed xitaa wax yar oo xad dhaaf ah oo ka sarreeya xadka wadada ayaa damaanad qaadi kara xadgudub iyo ganaax. Khasab maahan ama marwalba waa la ilaaliyaa, si kastaba ha noqotee waa edeb in la ilaaliyo farqiga isgoyska aan calaamadeysneyn marka lagu xayiro taraafikada si loogu oggolaado gelitaanka gawaarida. Haddii aad dareentay haadka kaa xiga inuu ka tagayo farqiga meelahaan, waa edeb isla sidaas oo kale samee. Had iyo jeer waa caqli in si taxaddar leh loo yeesho inta lagu guda jiro isku xidhka wadiiqooyinka taraafikada, gaar ahaan inta lagu jiro saacadaha degdegga (sida ku xusan sadarka kor ku xusan). Basasku waxay leeyihiin xaqa dariiqa markay soo galayaan taraafikada mararka qaarkoodna badanaa waxay la baxaan digniin yar.
Dadka Australiyaanka ah ayaa loo oggol yahay inay maraan haadka gudaha.
Qunsuliyadaha ku yaal Perth
Indonesia, 134 Adelaide Terrace, Bariga Perth. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
United States, 16 St. Georges Terrace,, fax: + 61 8 9231-9444. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hindiya, 12 St Georges Terrace. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Boqortooyada Ingiriiska, 251 Adelaide Terrace. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
New Zealand, 1 Sleat Road, Applecross. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
U jihada dhanka bari ee magaalada Perth:
Toodyay waa magaalo taariikhi ah oo ku taal webiga Avon, oo leh xaflado joogto ah. Waa meel loogu jecel yahay safarada maalinlaha ah iyo meelaha habeenkii laga tamashleeyo ee laga soo qaado Perth, iyo mar gurigii Bushranger Moondyne Joe.
Hyden waa magaalada ugu dhow Rock Wave, sameynta dhagax weyn oo u eg mowjad weyn oo jebinaysa.
Dhanka koonfurta, Margaret River (seddex saacadood Perth) waxay leedahay qaar ka mid ah khamriga adduunka ugu fiican. Cunto wanaagsan iyo xeebo aan hagaagsaneyn ayaa ka dhigaya gobolka Koonfur Galbeed inuu noqdo goob loogu jecel yahay. Waa maalin fasax ah oo wanaagsan.
U jihada woqooyi, raac Wadada Xeebta 60 illaa Saxaraha Pinnacles gudaha Nambung National Park. Meelaha kale ee xiisaha leh waa Jurien Bay, Cervantes oo leh stromatalites-keedii cajiibka ahaa, iyo (oo si liidata loogu calaamadeeyay Cervantes hore) Lesueur National Park ee ubaxyada duurka.
Cervantes waxay ku saabsan tahay xadka waqooyiga ee safar maalinle ah oo ka yimaada Perth. Halkaan laga bilaabo waxay noqoneysaa safar safar, waxaana jira wax badan oo aad u xun oo Australiya ah oo kaa horeeya. Meelaha maalin gudaheed ama wax u socda ayaa ah Dongara, Geraldton, Kalbarri National Park, Shark Bay / Monkey Mia, Carnarvon, iyo Exmouth & Coral Bay oo loogu talagalay Ningaloo Reef. Weli waddadu way sii fidsan tahay iyada oo ka sii gudubta qaaradda weyn ee cas. . .
Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta ee Perth
Hoolka Hotel Adina Perth
Hoolka Hotel Adina Perth, Barrack Plaza
Dhammaan Suites Perth guryaha
Guryaha Antonas Verandah Perth
Hubinta Ascot Quays Apartment Hotel Perth
Guryaha La Xaqiijiyay ee Waterside Perth
Xeebta Manor Bed & Quraac Perth
Guryaha ugu Fiican Western Plus Ascot
Gubashada Xeebta & Quraacda
Magaalada Joogtada Apartment Hotel Perth
Biyaha Magaalada Perth
Qolalka Clarion ee Mullaloo Beach
Raaxada hostel Belmont Hotel
Raaxada Hotel Perth City
Raaxada Inn Bel Eyre Belmont
Raaxada Inn Wentworth Plaza
Dalxiiska Dalxiiska Dalxiiska ee Xeebta Coogee
Coranda Lodge Bed & Quraac Perth
Hoteelka Crown Metropol Perth
Hoteelka Crown Promenade Perth
Guryaha Duke Perth
Huteelka Duxton Perth
Hoteelka Esplanade Fremantle
Suugaanta Esplanade River Perth
Afar Qodob oo uu qoray Sheraton Perth
Fasaxa Inn Xarunta Magaalada Perth
ibis Styles Perth (horay xilli ciyaareedyadii oo dhan)
Hoteelka Joondalup City
Hotelka Kings Perth
Hoteelka Mantra On Hay Perth
Mantra oo ku taal Murray Perth
Miss Maud Hotel Swedish Perth
Mont Clare Boutique Apartments Perth.Waxaa La Siiyaa
Guryaha Fasaxyada Mountway Perth
Hoteelka Novotel Perth Langley
Shirkadda Ocean View Motel Perth
Timir Bed & Quraac Perth
Huteelka Parmelia Hilton Perth
Perth Vineyards Holiday Park Resort Dalxiis
Hoteelka Pier 21
Qolka Guryaha ee Possum Creek Lodge Perth
Tayada Dalxiiska Tayada Sorrento Beach
Hoteelka Rendezvous Magaalada Hotel Perth
Hoteelka Rendezvous Studio Perth Central
Seashells Adeegyada Guryaha ee Scarborough
Degmooyinka Somerset St Georges Terrace Perth
Sariirta Wanaagsan & Quraacda Lesmurdie
Huteelka Cusub ee Esplanade Perth
Hoteelka Richardson & Spa Perth
Degenaanshaha Sebel East Perth
Hoteelka Travelodge Perth
Beerta Dalxiiska ee Woodman Point - Fremantle Hotel
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Australia > Xalaal Safarka Perth